Wararka Maanta: Jimco, Aug 27, 2021-Garowe: Saddex qof oo ku neef qabatimoobay kiimiko ka daadatay booyad nadaafadda ka shaqeysa
Duqa magaalada Garowe, Axmed Barre, ayaa sheegay in ciidanka amniga ay gacanta kusoo dhigeen oo xireen darawalkii watay, Booyada Kiimikada ka qubatay, taasoo laga lahaa Wershedda Isbuunyada ee Tabaarak, taasoo dhowaan ku gubatay dab ka kacay gudaheeda.
Duqa magaalada ayaa sheegay in dadka waxyeeladu gaartay la dhigay isbitaalka guud ee Garowe, waxaana xaaladdiisa caafimaad laga dayrinayaa askariga Booliska, kaasoo hadda Oxygen ay ku xiran yahay.
“Booyaddu ma ahayn mid loogu talo galay inay kiimikada qaado sidaa awgeed ayay dhinacyada ka dalooshantay. Dad badan oo laamiga ku ganacsanayey ama marayey ayaa ka sheegtay indho xanuun iyo dhuun xanuun, waxaa la sheegay in dadka qaar suuxeen,” sidaasi waxaa yiri duqa Garowe oo ka hadlay dhacdadan.
Ciiddanka dab damiska Garowe ayaa markii dambe Nadiifin iyo barxid ku sameeyay kiimikada qubatay, waxaana dadweynaha lagu wargaliyay in ay ka fogaadaan aagga waxyeeladu ka dhalatay.